LOHMAN BROWN: SHARAXAADDA TARANKA DIGAAGGA IYO SAWIRADA, DABEECADAHA LAKABYADA, DIGAAGGA IYO DUSHOODA, MARKAY BILAABAAN INAY DEGDEGAAN, CONTENT - BEERAHA DIGAAGA
Si loo gaaro kororka wax soo saarka ukunta ee digaagga ugu badnaan waa mid ka mid ah hadafyada ugu muhiimsan ee dayactirka.
Si loo gaadho tan, isgoysyada waxaa loo isticmaalaa, ma aha kuwo la nadiifiyo.
Xakameyntu waa bacriminta digaagga ee laga helo gudbinta khadadka gudaha.
Waxay caan ku tahay wax soo saarka weyn, adkaysiga, adkaysiga oo ka sareeya wakiilada asalka ah.
Ilaa hadda, dalka intiisa ugu badan ee soo saara ukunta-hilibka-hilibka ayaa loo tixgeliyaa inuu yahay Loman Brown.
Breed Lohmann Brown waxay u muuqatay inay u mahad celineyso tijaabooyinka geneticists iyo shaqooyinka shirkadda Lohmann Tierzucht GmbH ee Germany. Beelaha looxyada ah ee jiilka kowaad ee afarta asalka ah.
Shimbiraha xayawaanka ee xayawaanku waxay leeyihiin bunal madow oo leh baalal iyo baalal. Dumarka hooyada waxay leeyihiin xajmi cad. Hawlaha ugu muhiimsan waxay ahayd in la abuuro iskudhaf aad u saraysa, iyada oo aan loo eegin xaaladaha xabsiyada.
Qeexida digaaga Loman Brown
Isku tallaabyada noocaan ah waxay leeyihiin duumo guduudan-bunni ah. Da'da maalinlaha ah, dumarka waxaa lagu kala saari karaa cockerels by midabka: ee digaagaa waa brown, iyo ragga waa caddaan.
Inkastoo xaqiiqda ah in digaagga la keenay Ruushka laga bilaabo Jarmalka, waxay si fiican ugu noolaanayaan xaalad kasta oo cimilada ah.
Lo'da iyo dabaqyada lohmanka Lohman Brown waa mid caan ah, ma xishoodaan. Maaddaama jihada wadanku yahay ukun, shakhsiyaadka maaha kuwo u nugul miisaanka.
Mid ka mid ah sababaha caan ka mid ah noocyada this waa unpretentiousness ee digaagga. Digaagaha Loman Brown waxay tayadoodii wax soo saarka sida gaarka ah, iyo beerista warshadaha.
Qalabka muhiimka ah ee Lo'da Brown waa wax soo saarka ukumaha sareeya. Ukumahoodu waa weyn yihiin, qolofkuna waa midab madow;
Awoodda sare ee chicks (ilaa 98%);
xaddiga sare. Tani waxay bilaabmaysaa inay bilowdo xili hore marka la barbar dhigo isgoysyada kale. Chicks waxay noqotaa jinsi qaangaar ah da'da 135 maalmood. Muddada koritaanka oo dhan waa 161 maalmood. Qalabka ugu badan waxaa la gaarsiiyaa da'da 160-180 maalmood;
saamiga faa'iido badan ee tirada qumanka ee heley miisaanka cuntada lagu kharash gareeyo digaagga;
Sida hore loo xusay, qaababka digaagga ee dharka Loman Brown waa mid aan qabyo ahayn, oo ku haboon in lagu ilaaliyo baqashada;
hatchability of ukunta inta lagu jiro beerashada kuleelka - in ka badan 80%.
Marka laga soo tago sifooyinka qeexaya Lohman Brown ee jilicsan dhinaca dhinaca wanaagsan, iskutallaabta taranka ayaa leh yaraanta:
Ka dib 80 toddobaad oo ah ukumo-degdeg ah, digaagga ayaa lumiya wax soo saarkooda sare. Dhiirrigelinta ilaalinta digaag noocan ah ma aha, sidaas darteed waxaa loo diraa wejiga.
Tilmaamaha ugu muhiimsan ee noocyada noocan ah, sababtoo ah nooca xulashada, lama soo saari karo faraca. Habka kaliya ee lagu soo celin karo xooluhu wuxuu noqon lahaa iibsashada shakhsiyaadka dhallinyarada ah ama ukumaha si ay u kobciyaan warshad ku jirta warshado gaar ah.
Quudinta waa xaalad muhiim u ah horumarinta buuxda iyo koritaanka digaaga. Kaliya keegga la kariyay ayaa lagu shubaa karantiilka, iyo, laba todobaad, waxay fiiriyaan sida ay ugu duubaan hadhuudhka.
Ka dib afar iyo toban maalmood cuntadu way kala duwan tahay, siyaabo kala duwan ayaa loo maamulaa, qiimaha maalin walba waa la dejiyaa. Xaaladda shubanka, biyaha ku beddel bariiska.
Marka lagu hayo qafis maalinle ah, digaagga waxay cunaan 112-114 garaam oo feedh. Noocyada oo dhan waa in aan la siin digaagga buuggan. Waxay qaadataa wakhti dheer in la dheefshiido (ilaa lix saacadood).
Cuntada ugu fiican waa hadhuudh. Waxay ku habboon tahay dadka waaweyn iyo xayawaanka yaryar. Sii doofaarka digaaga, ha ka tegin masago. Si aad u hesho casiir leh, hindiso, hilib cad cad, ha ilaawin inaad ku darto borotiinka, fiber, fiitamiinada khudaarta cusub ilaa cuntada. Xasuusnow, inaad dhigto ukumo aan suurtagal ahayn iftiinka qoraxda.
Digaagga waxay ku habboon yihiin taranka gaarka ah, maaha oo kaliya sababtoo ah sifooyinka ukumaha oo kale, laakiin sidoo kale sababtoo ah soo saarista hilibka. 1.6-2 kiilo dheddig ah, illaa 3 kiilo oo roodle ah - celceliska tirada dadka ee Lohman Brown cross.
Iyadoo sannadkii la cuno raashin nafaqo la'aan, Loman latch ee jilbaha Loman Brown wuxuu awoodaa in uu keeno in ka badan 320 ukun, oo miisaankiisu yahay 62-64 garaam. Ukuntu waxay si gaar ah u joogteeyaan.
Kadibna waxaad fursad u leedahay inaad aragto noocyada cajiibka ah ee digaagga Lohman-ga Brown ee sawirka. Sidaan oo kale, waxaa lagu xannaaneeyaa beeraha waaweyn ee digaaga:
Oo tanu waa sawir ka yimid dhismo gaar ah oo laga soo qaaday xayndaabka guriga:
Tusaale kale oo xaqiiqda ah in guriga aad ku dhalan karto jinsigaan si aad u guul leh:
Soo dhaweyn, iyada oo aan wax faallo aheyn
Oo mar kale waxay ku hawlan yihiin shaqadan adag - raadinta wax ku jira cawska:
Cunto wanaagsan oo la kariyey, digaag fiican oo qaabeeya:
1 km oo u jirta Moscow Ring Road Moscow, 141001 Mytishchi, Pogranichny Dead End End, 4. Taleefanka lala xiriiro: +7 (915) 009-20-08; +7 (903) 533-08-22.
119048, Moscow, a / i 89. Telefoon: +7 (495) 639-99-32; email: [email protected]
Republic of Mordovia, Saransk, ul. Kovalenko d. 7a. Telefoon: +7 (834) 275-82-35. Koodhka boostada: 430034.
Gobolka Belgorod Cinwaanka Boostada: st. Frunze, d. 198. +7 (926) 044-14-30.
Magaalada Primorsky Krai ee Vladivostok, st. Magnitogorsk, 30, oo ah 506. Lambarka boostada: 690000.
Magaaladda Smolensk, wadada Roslavl, 7 km LLC "Viteko". Lambarka boostada: 214009.
Loman White. Loman White lakab xuduudaha ayaa la saadaalinayaa in ay hore u koraan (4 bilood) iyo korodhka wax soo saarka. Tirada ukunta la dhigay sanadka - 340 gogo '. Badeecadu waxay leedahay cabbir weyn iyo qolof madow ah.
Loman White waa iskutallaab loogu talagalay soosaarka ukunta sare, miisaankoodu waa yar yahay. Celcelis ahaan, miisaanka nool ee miisaanka waa 1.5 kg. Qadarka cunnadu ku bixisay ee la xidhiidha tirada ukunta soo saartey waa yar tahay, taas oo ka dhigaysa dhaqaaleheeda dhaqaale. Ma cunaan cunto badan. Loman Digaaga cad - uma baahnid inaad fiiro gaar ah, qaadato xididada noocyada kala duwan ee cimilada, xitaa marka lagu hayo qashinka digaagga ee liita.
Hens oo leh qalabka dhegaha, marka lagu daro muuqaalkooda xumaaday, waxay leeyihiin karti wax soo saar fiican.
Laryngotracheitis ee digaagga: calaamadaha, sababaha, qaababka daaweynta, tallaabooyinka ka hortagga, iwm ayaa laga heli karaa bogga: http://selo.guru/ptitsa/kury/bolezni/k-virusnye/laringotraheit.html.
Goynta digaagga. Iskutallaabta Dutch, oo laga soo qaaday jihada ukunta. Midabka - caddaan, madow, bunni.
Gestation wuxuu bilaabmaa 5 bilood. Egg ballaaran, oo culeyskiisu yahay 62 garaam. Digaagga ayaa miisaamaya ilaa 2 kiilo. Tirada ukunta sannadkiiba celcelis ahaan 405 gogo '. Cunto qaadashada maalin kasta oo ku saabsan 110 garaam. Saddex nooc oo dalal iskudhaf ah: Brown, White iyo Black.
Digaag digaag ah. Midabkana laga bilaabo cadaan ilaa caleenta. Tirada ukumaha sannadkiiba 300-310 gogo '.
Celceliska miisaanka ukunta waa 67 garaam. Ukunta qoyan waa midab madow. Isticmaalka cunto - 114 garaam. Haysashada maaddo adag. Ukunta sarreysa. Digaagga si wanaagsan ayey ula qabsadaan xaaladaha kala duwan.
Digaagga lohan Brown ayaa dhowaanahan noqday mid ka mid ah kuwa ugu caansan suuqa. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in aysan aheyn mid aad u xishood ah, waxaa laga dhigi karaa shuruudo kasta, iyaga oo isticmaala qadar yar oo cunto ah. Iyadoo ay taasi jirto, waxaa lagu gartaa soosaarka ukumaha sareeya, hufnaanta wanaagsan iyo dhalashada caafimaad leh.